Guulihii Mucjisada Ahaa Ee Sayniska Laga Gaaray Sanadka 2014 (SAWIRRO CAJIIB AH) - Daryeel Magazine
Guulihii Mucjisada Ahaa Ee Sayniska Laga Gaaray Sanadka 2014 (SAWIRRO CAJIIB AH)
Sanad waliba, waxaa uu qalinka qaban jiray guulo dhowr ah oo sayniska laga gaaray, taasoo buun-buuninteeda ay ahayd mid aad u saraysa, guulihii iyo shaacintii mucjisada ahayd ee sadihii tagay lagu talaabsaday waxaa ay gundhig iyo aas-aas ay u noqdeen hal abuur iyo ikhtiraac cusub. Sanadkaan sii dhamaanaya ee 2014-ka waxaa dareenka dad badani uu soo jiitay baaxadda iyo awooda uu bani’aadamku ka gaarey sayniska. Waxaa si kooban u taaban doonaa guulo cajiib oo sanadkaan ay soo hooyeen culimada sayniska.
Howgalgalkii Rosetta ee hawada sare (Space) oo gaaray meel aanan laga filayn
Howlgalkii hawada sare (Space) oo ay aadka ugu han-waynaayeen reer Yurub ayaa sawirro ka soo qaaday meelo ka shishaysa meeraha faraare (Mars). Howlgalka Rosetta ayaa saynisyahanna ka caawin doona ay in ogaadaan sida ay noloshu uga bilaabatay dhulka iyo isbadalka Juquraafi ee uu dhulka soo maray.
Isticmaalidda dhiiga da’yarta si looga hortago gabowga
Dadaalkii ay saynisyahannudu ugu jireen ka hortagga gabowga ayaa sanadkaan lagu guulaystay in xal dhab ah u helaan, waxaana khubaradii ku howlaneed ay si rasmi ah shaaca uga qaadeen in hadii dhiiga dadka yaryar lagu shubo dadka da’ada ah (duqoobay) in uu jirkooda uu isqabsanayo, maskax ahaana ay noqon karaan kuwo kala mid ah dadka dhiiga looga shubay oo kale. Waxaana sanadkaan wixii ka dambeeyay aanan laga walwali doonin gabowga jirka qofka.
Aaladda Robotska oo wixii hadda ka dambeeya kormeer la’aan shaqayn karta
Robots-ka ayaa sidoo kale sanadkaa lagu guulaystay in ay kormeer la’aan shaqeeyaan, taasi oo noqonaysa taabo muhiim u ah dadyowga teknolojiyadda la qabsaday.
Aalad laga matalay maskaxda bani’aadamka oo la hindisay
Horumarro muhiim ah oo laga gaaray baarista ama hindisidda caqli artifishiyal ah ayaa waxaa bishii August ahayd ku dhawaaqay shirkadda IBM. Waa abuuritaanka aalad micro-processor ah taasoo laga shabahay maskaxda bani-aadamka
Aaladaani cusub loogu magac daray TrueNorth, waxaa ay ka koobantahay 5.4 bilyan oo fiilooyin il maqabato ah, kuwaasoo isku xiriirsan si loo shabaho neerfaha iyo isku-xiranka maskaxda bani-aadamka kuwaasoo la borogaraamin kara.
Inkastoo maskaxda bani-aadamku ay ka koobantahay 100 bilyan oo neuro iyo 150 tiriliyon oo synapses ah, hadana shirkadda IBM ayaa ka dhawaajisay in ay suurtagal tahay in la borograamiyo chip-ka cusub ee laga shabahay maskaxda bani-aadamka, kaasoo fahmi kara dhibaatooyinka, islamarkaana xalin kara wakhtiga ay ku haboontahay iyadoo lagu xisaabtamayo xaaladda ku xayn-daaban
Darbigii ugu qadiimsanaa oo ay ku xardhanyihiin qoraalo iyo calaamado muhiim ah oo laga helay Indonosia
Saynisyahannada baara haraadiga taariikhihi hore ayaa sanadkaan waxaa ay jasiiradda Sulawesi ee waddanka Indonosia ka heleen haraadi qoraalo ah oo 400,000 oo sano ka hor ahaa sida ay xaqiijeen.
Hab cusub oo lagu dawayn karo cudurka macaanka oo shaaca laga qaaday
Cilmi-baarayaal ayaa daaha ka rogay hab cusub oo daawo loogu heli karo cudurka sokorowga ama macaanka, waxaa ay ogaadeen sida unugyada bani’aadamka looga dhigi karo pancreatic shaqayn karo islamarkaana sahla in daawooyinku ay wax ka qabtaan.
Abuurintaanka DNA (Hidde-sheege) cusub iyo Baahinta aalaha caruurta…
Isku xiranka nolosha aadanaha, waa mid ka turjuman dhaxaltooyo, laguna ogaado DNA. Sanadkaan sii idlaanaya ayaa saynisyahannadu waxaa ay ku guulaysteen in abuuraan DNA cusub iyo waliba sii balaarinta aaladaha lagu caruurta lagu bacriimiyo iyadoo la isu gaynayo dheecaanada labka iyo jinsiga. Waxaa ayna tani noqonaysaa mid wixii hadda ka dambeeya soo xiri doonta wareerka kataagan jinsiyadda iyo dhalashada.
Dowladaha horumaray ayaa kharashka ugu badan u qoondeeya sayniska iyo cilmibaarista taasoo sahashaay in guulahaan taariikhiga ah la gaaro sanadka 2014. Dhanka kale baarista iyo ruclaha loogu jiro in lagu kala horeeya horumarka sayniska iyo teknolojiyaddu ayaa waxaa ay la soo baxeen caqabado amni, bulsho iyo dhaqaale. Saynisyahannada caalamka ayaa guusha ay 2014-ka gaareen ku tilmaaman mid taariikhi ah aad loo naawilayay.
W/D: Maxamed Bille Maxamed
Talooyin Iyo Xikmado Laga Dhaxlay Saynisyahankii Albert Einstein Maxaa Ku Dhacaya Jidhkaaga Haddii Aad Maalin Kasta Cunto 3 Xabbo Oo Timir Ah?? Hababka Loo Kordhiyo Awoodda Maskaxda Xaqiiqooyin Cajiib ah oo Hurdada ku Saabsan